Ma Tahay Fariintii Ugu Cajiibsanayd Ee Taageere Qoray? Taageere Si Qiiro Leh U Soo Bandhigay Dhacdo Lionel Messi Dhex Martay. - Gool24.Net
Ma Tahay Fariintii Ugu Cajiibsanayd Ee Taageere Qoray? Taageere Si Qiiro Leh U Soo Bandhigay Dhacdo Lionel Messi Dhex Martay.
Taageerayaasha kubbada cagtu madax martay waxa ugu wayn ee ay noloshooda ku helaan waa in ay la kulmaan halyayada ay waqti badan u huraan.
Mid ka mid ah taageerayaasha kooxda Barcelona ayaa si nasiib ah suuq ugula kulmay Lionel Messi, kadib waxa uu isku qaatay qalinka iyo warqada si uu dareenkiisa ugu soo bandhigo Messi iyo kubbada cagta aduunka.
Santiago Alberione waa taageeraha sida lama filaanka ah suuqa ugula kulmay Lionel Messi, wuxuuna soo bandhigay dareenkii waalida ahaa ee uu kulankani u yeeshay.
Laakiin kulankan waxaa heer kale u qaaday fariinta uu Santiago Alberione ka soo saaray taas oo keentay in ay xataa wargaysyada Spain ugu caansani daabacaan.
Haddaba halka ka akhriso fariinta taageeraha la kulmay Messi oo dhamaystiran iyo qaabkii qiirada lahayd ee uu kubbada cagta aduunka ugu sameeyay.
“Waa maalin aanu i laawin karin qof kaas oo aaminsan ciyaartoyda. Haddii aad tahay qof ka soo horjeeda Messi, waxaan rajaynayaa in aanad xataa kan akhrisan”.
“Maanta waxaan fuliyay riyadaydii ugu waynayd, waxaan la kulmay Lionel Andres Messi. Waxaan nasiib u yeeshay in aan isaga sawir la qaato isla markaana aan hadiyad guriga uga qaatay taas oo noqon doonta calaamada ugu taariikhda leh ee aan kula xidhiidhi karayo Sportska”.
“Waqtigii inta badan la sugayay waxa uu Castelldefels ku yimid abaaro 9:00 . Waxaan arkay ninkan gaaban oo surwaal gaaban xidhan oo ka gudbaya dariiqa isaga imanaya halkii aan joogay , wadnahaygu siddeed jeer ayuu ilbidhiqsigii i garaacay, cunahayga ayaa qalalay, codkuna wuu iga qaldamay markii aan isaga arkay!”.
“Halkan ayuu yimid, waa Messi!!!!.Wixii xigay ee aan isaga ixtiraam badan ku waydiiyay waxa uu ahaa haddii uu sawir ila qaadan karo, aniga oo ka raali galinaya in aan soo dhex galay waxyaabaha isaga gaarka u ah”.
Sawirka Messi iyo Santiago Alberione
“Isaga oo wajigiisa ka dhoolo cadaynaya ayuu aqbalay wuxuuna yidhi ‘ha walwalin, taasi aniga igama cadhaysiinaysee”.
“Kadib waxa uu ii saxiixay shaadhkayga, wuxuuna i waydiiyay haddii aan ka imid Cordoba. Waxaan kaga jawaabay su’aal kale, aniga oo waydiinaya haddii ay si cadaan ah ugu ahayd in uu aniga igu gartay dhoolo cadaynta iyo in aan indhaha ku xidhnaa okiyaale”.
“Is dhul dhig iyo qosol cajiib ah waxa uu yidhi haa (astaamaha ayaan kugu gartay). Kadib markale ayaan u mahad celiyay isaga waxaanan ka raali galiyay in aan isaga ka cadhaysiiyay”.
” Waxa uu isaga oo dhoolo cadaynaya yidhi : ‘Haka walwalin naftaada ilaali’ Hab ayuuna isiiyay wuxuuna ruxay gacantayda wuxuuna tagay guriga”.
“Ugu dhawaan waxay ahaayeen 60 ilbidhiqsi laakiin waxay la dareen ahayd sidii waqti aan dhamaad lahayn. Xaqiiqdii kadib qiiro ayaan la ooyay, waxaan la kulmay ciyaartoyga waqtiga oo dhan ugu fiicnaa(iyada oo loo tixgalinayo shuruudayda si aan uga dheeraado wax dood ah)”.
“Maanta waxaan fuliyay riyadaydii ay in yari fahmi karto maanta maadaama oo aan la kulmay Messi, maanta waxaan la kulmay ninka aduunka ugu farxada badan”.
“Waan ku jecelahay, waad ku mahadsan tahay in aad Argentina tahay” ayuu taageerahan qoraalka layaabka leh sameeyay hadalkiisa ku soo xidhay.